ငယ်ငယ်ထဲကစွဲလန်းခဲ့တဲ့သီချင်းလေးကို သီချင်းပိုင်ရှင် ပြည်သူချစ်အဆိုတော်ကြီးမေခလာနဲ့အတူ ပြန်လည်ဖန် တီးသီဆိုမယ်ဆိုတဲ့ ယွန်းမြတ်သူ – XB Media & News
ငယ်ငယ်ထဲကစွဲလန်းခဲ့တဲ့သီချင်းလေးကို သီချင်းပိုင်ရှင် ပြည်သူချစ်အဆိုတော်ကြီးမေခလာနဲ့အတူ ပြန်လည်ဖန် တီးသီဆိုမယ်ဆိုတဲ့ ယွန်းမြတ်သူ
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေယွန်းမြတ်သူကတော့လတ်တလောမှာ ပရိသတ်ပါးစပ်ဖျားမှာရေပန်းအစားဆုံး သီချင်းရဲ့ပိုင်ရှင်လို့ဆိုရမှာပါ။ ပထမCovidကာလမှာလည်း သူမရဲ့အဆင်ပြေမနေပါဘူးသီချင်းဟာ ပရိသတ်တွေအတွက် ရေပန်းစားခဲ့ပြီး အခုဒုတိယ Covidကာလမှာဆို ရင် လည်း သီချင်းမထွက်ရသေးပေမယ့်သူမရဲ့ ”နင်လမ်းတွေ့ခဲ့ရင်”သီချင်းဟာ ပရိသတ်တွေပါးစပ်ဖျားနေရာယူထားခဲ့တဲ့သီချင်း ဖြစ်ခဲ့ တာပါ။
လက်တလောမှာလည်းအသစ်စက်စက်ထွက်ရှိထားတဲ့𝘽𝙍𝘼𝙄𝙉𝙇𝙀𝙎𝙎 Music Video လေးကလည်း ပရိသတ်ရင်ထဲကိုရောက်ရှိ ကာ TikTokမှာလည်းလူအများကြိုက်နှစ်သက်ကာ ဆော့ကစားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း အနုပညာသီချင်းသစ်တွေထပ် မံထွက်ရှိမယ့် ယွန်းမြတ်သူကတော့ ပြည်သူချစ်အဆိုတော်ကြီး မေခလာထံသို့ပြန်လည်သီဆိုချင်တဲ့သီချင်းလေးအတွ က်သွားရောက်ခဲ့ တယ်လို့သိရပါတယ်။
တေးရေး တေးဆိုဗျတ္တ အသံအားကောင်းတဲ့သမီး ယွန်းမြတ်သူ ချစ်ငယ်အိမ်မှာ တွေ့ကြ ဆုံကြ စကားတွေပြောကြတယ်သမီးယွန်းမြတ်သူ ငယ်ငယ်ထဲကစွဲလန်းခဲ့တဲ့ချစ်ငယ်သီချင်းလေးတပုဒ်ရှိတယ်တဲ့ 😘အတူဆိုချင်တဲ့ သီချင်းလေးနာမည် ဘာဖြစ်မလဲ ချစ်တို့စဉ်းစားကြည့် လိုက်နော်😘ခု့တော့ ပြောပြသေးဘူး ချစ်ငယ်စိတ်ပေါ့ပါး တဲ့ချိန်ကျ ပြောပြမယ်နော် ❤️”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ချစ်ငယ်အကောင့်က တင်လာခဲ့တဲ့ အပြင် ယွန်းမြတ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်း”အန်တီချစ်ငယ်နဲ့ တူတူ ပြန်ဖန်တီးမယ့် သီချင်းလေးက ဘယ်သီချင်းလေးဖစ်မလဲ? ❤️ဆိူပြီး ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတ်တွေလာ်းခန့်မှန်းခဲ့ကြပါဦးနော်။
Source- Yoon Myat Thu
CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရယြန္းျမတ္သူကေတာ့လတ္တေလာမွာ ပရိသတ္ပါးစပ္ဖ်ားမွာေရပန္းအစားဆုံး သီခ်င္းရဲ့ပိုင္ရွင္လို႔ဆိုရမွာပါ။ ပထမCovidကာလမွာလည္း သူမရဲ့အဆင္ေျပမေနပါဘူးသီခ်င္းဟာ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေရပန္းစားခဲ့ၿပီး အခုဒုတိယ Covidကာလမွာဆို ရင္ လည္း သီခ်င္းမထြက္ရေသးေပမယ့္သူမရဲ့ ”နင္လမ္းေတြ႕ခဲ့ရင္”သီခ်င္းဟာ ပရိသတ္ေတြပါးစပ္ဖ်ားေနရာယူထားခဲ့တဲ့သီခ်င္း ျဖစ္ခဲ့ တာပါ။
လက္တေလာမွာလည္းအသစ္စက္စက္ထြက္ရွိထားတဲ့𝘽𝙍𝘼𝙄𝙉𝙇𝙀𝙎𝙎 Music Video ေလးကလည္း ပရိသတ္ရင္ထဲကိုေရာက္ရွိ ကာ TikTokမွာလည္းလူအမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္ကာ ေဆာ့ကစားေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း အႏုပညာသီခ်င္းသစ္ေတြထပ္ မံထြက္ရွိမယ့္ ယြန္းျမတ္သူကေတာ့ ျပည္သူခ်စ္အဆိုေတာ္ႀကီး ေမခလာထံသို႔ျပန္လည္သီဆိုခ်င္တဲ့သီခ်င္းေလးအတြ က္သြားေရာက္ခဲ့ တယ္လို႔သိရပါတယ္။
ေတးေရး ေတးဆိုဗ်တၱ အသံအားေကာင္းတဲ့သမီး ယြန္းျမတ္သူ ခ်စ္ငယ္အိမ္မွာ ေတြ႕ၾက ဆုံၾက စကားေတြေျပာၾကတယ္သမီးယြန္းျမတ္သူ ငယ္ငယ္ထဲကစြဲလန္းခဲ့တဲ့ခ်စ္ငယ္သီခ်င္းေလးတပုဒ္ရွိတယ္တဲ့ 😘အတူဆိုခ်င္တဲ့ သီခ်င္းေလးနာမည္ ဘာျဖစ္မလဲ ခ်စ္တို႔စဥ္းစားၾကည့္ လိုက္ေနာ္😘ခု႔ေတာ့ ေျပာျပေသးဘူး ခ်စ္ငယ္စိတ္ေပါ့ပါး တဲ့ခ်ိန္က် ေျပာျပမယ္ေနာ္ ❤️”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ ခ်စ္ငယ္အေကာင့္က တင္လာခဲ့တဲ့ အျပင္ ယြန္းျမတ္သူကိုယ္တိုင္ကလည္း”အန္တီခ်စ္ငယ္နဲ႔ တူတူ ျပန္ဖန္တီးမယ့္ သီခ်င္းေလးက ဘယ္သီခ်င္းေလးဖစ္မလဲ? ❤️ဆိူၿပီး ခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္ေတြကိုေမးခြန္းထုတ္ခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတ္ေတြလာ္းခန္႔မွန္းခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။
Anniversary နေ့လေးမှာ ချစ်ဇနီးလေး ဒါဒါအတွက် နောက်ဆုံးပေါ် iphone အသစ်ကို couple ဝယ်ပြီး ဘယ်လောက်ချစ် တယ်ဆို တာ ကို သက်သေပြလာတဲ့ စိုးသူ
ဖခင်ကြီး အသက်၇၀ပြည့်မွေးနေ့အလှူတော် မင်္ဂလာ အ ဖြစ် ကျိုက်ထီးဆောင်းဘုရားစေတီတော်ကြီးနှင့် ကေလာသဘုရားစေတီတော်ကြီးတို့အား အလှူငွေ ကျပ်သိန်း(၁၀၀၀ )စီလှူဒါန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဦးဇေသီဟ